Samarekha.com.np :: विचार |
Home » Archives by category » विचार
सेयर बजारमा कम्पनी छनौट गर्ने आधारहरू
विषय प्रवेश सेयर बजारमा उपयुक्त कम्पनी छनौट गर्नु लगानीकर्ताका लागि एक चुनौती हो । लगानी गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको पैसा बचाउनु र बढाउनु हो । आजको विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थामा उचित लगानीको निर्णय विश्लेषण जटिल विषय हो । लगानीकर्ताहरू प्रायः यसैमा…
‘म काठमाडौंमा छु, घर जान सकिन, एक्लै छु । मैले जीवनमा परिवार वाहेक अन्य व्यक्तिहरु कति महत्वपूर्ण हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा सिकेकी छु । मेरो लागि यो लकडाउन अवधिको आशा भनेको म छिट्टै मेरो परिवारलाई भेट्ने छु भन्ने हो ।’…
बन्दाबन्दीको ३५ औं दिनको साँझको खाना खाएर भान्साको काम सकेपछि हातमा मोबाईल लिएर नयाँ खबर खोज्ने क्रममा मोबाईलको स्क्रिनमा औंला घिसार्न थालेकी मात्र थिएँ, एउटा अनलाइनमा राखिएको एक शीर्षकमा नजर पुग्यो –‘लकडाउनमा लुडो खेल हारेको रिसमा पतिले भाँचे पत्नीको…
लकडाउनमा महिलाबिरुद्धका हिंसा र असुरक्षा
लकडाउनका बेला महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा र असुरक्षाको अवस्था कस्तो होला ? लकडाउनका बेला कोहीमाथि हिंसा भैरहेको भए उसले कहाँ सम्पर्क गर्ने ? बाहिर निस्केर ज्यान कसरी जोगाउने ? न्याय खोज्न कहाँ जाने ?…
बाल संरक्षणमा नागरिक समाजको भूमिका
अहिले विश्व नै कोरोनाको महामारीले आक्रान्त छ । हजारौ मानिस मरिसके । लाखौको संख्यामा संक्रमित छन । जसमा बढिजसो बृद्धबृद्धा र बालबालिका यसको चपेटामा परेका छन । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । हालसम्म ६ जनामा संक्रमण भेटिएको छ…
आत्महत्या रोकथाम गर्न सहकार्य गरौं
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हरेक ३ सेकेन्डमा १ जनाले आत्महत्याको प्रयास गर्छन् र प्रत्येक ४० सेकेन्डमा १ जना, १ दिनमा ती हजारा र वर्षभरिमा ८ लाखले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । विश्वमा हरेक वर्ष अकालमा ज्यान गुमाउने १५…
मानवताको जरो हल्लिएको समय
साउनको मध्यतिर कञ्चनपुरमा १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपश्चात् हत्या भएको खबर आयो । शंकास्पद अवस्थामा फालिएको उनको विद्यालय जाने साइकल र पुस्तकको अलपत्र तस्बिर हेर्दा मलाई व्यक्त गर्नै नसकिने दुखाइको महसुस भयो । त्यो घटना मानवताविरोधी अपराधको उच्चतम रूप र मानव…
पुरूषवादी व्यवस्था रहेसम्म प्रत्येक नारीले पाएको एकएक यातनाको हिसाब पुरूषले दिनैपर्छ । पुरुष भएकै कारण लज्जित छु म । लज्जित हुनका लागि मसँग जति कारणहरू छन्, त्यति त लज्जित नहुनका लागि स्पष्टीकरणका बुँदा पनि छैनन् । पुरुष भएर जन्मेकैले लज्जित हुनु नपर्ने हो ।…
महिला जागरणको उत्कृष्ट नमूना
‘समरेखा’ पत्रिकाको उदय समयको उपज हो । यो दाङबाट कसरी टुसाउन सक्यो ? यसको पनि सानोतिनो इतिहास छ । जसरी धानको बाला झुल्न माटो, पानी, बिऊ, श्रमशक्ति (हलो, कोदालो, हली आदि) परिबन्द मिल्नुपर्छ र मान्छे भोकमरीबाट बच्न सक्छ त्यसरी नै…
आवाजबिहीनको सच्चा प्रतिनिधि ‘समरेखा’
समरेखा म्यागजिन न्याय र समानताको आवाज बुलन्द गर्ने सशक्त माध्यमको रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ । म्यागजिनले समाजमा शान्ति, महिलाको समान अस्तित्व तथा आत्मसम्मान, सार्वजनिक सरोकारका सबै तह र क्षेत्रमा समान सहभागिताका आवाजहरुलाई निरन्तर रुपमा पस्किरहेको हुन्छ । लैङ्गिक…